“बुढेसकालमा छोराले सेवा गर्ला भनेर छोरो जन्माए, २२ वर्ष बित्यो छोरो बेखबर छ” – Nepalpostkhabar
“बुढेसकालमा छोराले सेवा गर्ला भनेर छोरो जन्माए, २२ वर्ष बित्यो छोरो बेखबर छ”
Hemant KC । २३ मंसिर २०७३, बिहीबार ०३:१७ मा प्रकाशित
२३ मंसिर, रामपुर (पाल्पा) । “बुढेसकालमा छोराले सेवा गर्ला भनेर छोरो जन्माए, २२ वर्ष बित्यो छोरो बेखबर छ”, नेत्रप्रसाद तिवारीले बिलौना गरे । रामपुर नगरपालिका–७ सुन्दरटोल बस्ने तिवारीका छोरा खगनाथ तिवारी बेपत्ता भएको २२ वर्ष हुँदा पनि उनी अझै बेखबर छन् ।
“कसले कहाँ लग्यो, कता गयो, जिउँदो छ या म-यो, केही पत्तो पाइएन”, उनका बाबु नेत्रप्रसादले भने । १९ वर्षको उमेरमा विसं २०५१ साउन ९ गते दिउँसो घरबाट निस्केका खगनाथ अहिलेसम्म आफन्त, परिवार, छिमेकी, साथी कसैको पनि सम्पर्कमा नभएको परिवारका सदस्यको भनाइ रहेको छ ।
बुढेसकालमा छोराले सहारा दिन्छ कि भनेको छोरो नै बेपत्ता हुँदा निकै पीडा मनमा बल्झिरहने गरेको बाबु नेत्रप्रसादले भने । चाडपर्वका बेला गाउँमा अरूका छोरा देश विदेशबाट घर फर्कंदा, छोराको झझल्कोले सताउने गरेको उनले बताए । उमेरले ६७ वर्ष पुगेका नेत्रप्रसाद जीवनको अन्तिम घडीसम्म भएपनि छोरो घर फर्कन्छ कि भन्ने आशामा छन ।
दुःख गरेर छोरो हुर्काएँ, अहिले पालनपोषण गर्ने बेलामा छोरो नै बेपत्ता छ । कसैले अपरहण गरेर लग्यो कि कहाँ छ ? सधैँ उनले भेट्ने जो कोहीलाई पनि यही प्रश्न गर्छन् । एकातिर श्रीमती चन्द्रकला तिवारीको मृत्युको पीडा, अर्कोतिर छोरो बेखबर रहँदा उहाँका दिन सधैँ आँसुमा बितेका छन् । “खोज्न जाउँ कहाँ ? केही पत्तो छैन, घर बसौँ त मनमा धेरै कुरा खेल्छन्, बुढेसकाल लाग्यो, छोरो घर फर्किएन”, उनले भनिन ।
नेपालका धेरैजसो र भारतका केही स्थानमा समेत खोजीनिती गर्दा पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नरहेको उनका दाजु दोबराज तिवारीको भनाइ छ । सबैसँग मिजासिलो पाराले बोल्ने, रातो वर्ण भएका भाइ खगनाथको बेखबरको पीडाले दिनरात परिवारका सबै सदस्यलाई तड्पाउने गरेको उनले भने । परिवारले भने बेखबर बनेका खगनाथ अझै पनि घर आउने आशा गरिरहेको छ । रासस